"सर्पगन्धा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"सर्पगन्धा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
सर्पगन्धा (सम्पादन गर्ने)
१४:३८, २८ मार्च २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन
७८ बाइटहरू हटाइयाे , १० वर्ष अघि
स्वचालित हिज्जे सम्पादन, replaced: को → को (4), मा → मा (2), खरिद → खरीद (2), जमिन → जमीन, रुप → रूप (7), हरु → हरू ...
०१:५४, १७ फेब्रुअरी २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
Ripchip Bot (कुरा गर्ने • योगदान)
सा (r2.7.1) (रोबोट ले थप्दै: si:ඒකාවේරිය)
१४:३८, २८ मार्च २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (स्वचालित हिज्जे सम्पादन, replaced: को → को (4), मा → मा (2), खरिद → खरीद (2), जमिन → जमीन, रुप → रूप (7), हरु → हरू ...)
वानस्पतिक परिवार : Apocynaceae
[[Image:Rauwolfia serpentina(Flower).jpg|thumb|सर्पगन्धा कोसर्पगन्धाको फूल]]
[[File:Rauvolfia serpentina 003.JPG|thumb|left|upright| सर्पगन्धा कोसर्पगन्धाको फल]]
[[Image:Rauwolfia serpentina at talkatora gardens delhi.jpg|thumb|left|]]
सर्पगन्धा (रावल्फिया) एक वहुवर्षे सदावहार विरुवा हो ।हो। यसको व्यापारिक नाम रावलफिया हो ।हो। रावलफिया भन्ने शब्द १६ औं शताब्दिका जर्मन चिकित्सक राउओल्फको नामबाट आएको हो ।हो।
सर्पगन्धा करवीर परिवारको विरुवा हो ।हो। यो विरुवा साधारणतया ५० से.मी. सम्म उचाई भएता पनि कहिले काही १ देखि १.५ मिटरसम्म उचाई भएको पाइन्छ ।पाइन्छ। यसका पातहरुपातहरू चिल्ला , लामा , भालाकार हुन्छन् र प्रत्येक आँख्लाबाट तीन–तीन वटा पातहरुपातहरू निस्कीएका हुन्छन् ।हुन्छन्। फूल झुप्पा झुप्पा भएर फुल्दछन् र हल्का सेता र गुलाफी रंगका हुन्छन् ।हुन्छन्। यसका फूलहरुफूलहरू चैत्रदेखि फुल्न शुरु गर्छन् र पोष सम्म फूल फुल्ने क्रम जारी रहन्छ ।रहन्छ। फलहरुफलहरू ज्येष्ठको अन्तिमबाट पाक्न शुरु गर्छन् ।गर्छन्। फलको रंग पाकेपछि कालो हुन्छ ।हुन्छ। फल र बीउ चेप्टो गोलो हुन्छ ।हुन्छ। बीउको रंग खैरो हुन्छ र बाहिरी भाग कडा हुन्छ ।हुन्छ। जाडो याममा यो विरुवा सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ र वसन्त ऋतुमा नयाँ पालुवा आउन शुरु भै फूल फूल्न थाल्दछन् ।थाल्दछन्।
अत्याधिक संकलनले गर्दा यो विरुवा लोप हुने स्थितिमा पुगेकोले प्राकृतिक अवस्थाबाट संकलन गरि व्यापार गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ र यसलाई संकटापन्न विरुवाको सुचीमा समेत राखिएको छ ।छ।
प्राकृतिक अवस्थामा यो विरुवा पतझर ओसिलो जंगलमा पाइन्छ ।पाइन्छ। समुद्र सतह देखि १२०० मिटरको उचाई सम्म यो विरुवा पाइन्छ ।पाइन्छ। विशेष गरेर सालको जंगलमा यो विरुवा पाइन्छ ।पाइन्छ। उष्ण प्रदेशिय वनस्पति भएकोले यो विरुवा नेपाल लगायत भारत , वर्मा आदि देशहरुमादेशहरूमा पाइन्छ यो एसिया बाहेक अफ्रिका र अमेरिकाको उष्ण भूभागमा समेत पाइन्छ ।पाइन्छ। भारतमा मात्रै यसका ५ प्रजाति पाइन्छन् ।पाइन्छन्। हाम्रो देशमा यो तराई क्षेत्रमा पाइन्छ ।पाइन्छ।
रावलफियाको जरा शताब्दी पहिले देखि नै आयुर्वेदिक औषधीमा प्रयोग हुँर्दै आईरहेको छ भने आधुनिक औषधीमा पनि यसको प्रयोग केही दशक अघि देखि भैरहेको छ ।छ। त्यसैले युरोपिय मुलुकहरुतथामुलुकहरूतथा अमेरिकामा यसको आपुर्ति भारत, पाकिस्तान , श्रीलंका , बर्मा ,थाईल्याण्ड आदि एशियाली देशहरुबाटदेशहरूबाट निकासीबाट हुने गरेको छ ।छ। सर्पगन्धा औषधीमा उपयोग हुने वनस्पति भएकोले यो विरुवाको महत्व निकै छ ।छ। यो विरुवाको औषधीय गुणबारे करिब ४०० वर्ष देखि नै ज्ञात भएको विश्वास गरिएको छ ।छ।
सर्पगन्धाको जरा उच्च रक्तचापका लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ ।मानिन्छ। यो जडीबुटीलाई प्रशोधन नगरी कोरा रुपमारूपमा नै रक्तचापको रोगमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।सकिन्छ। यसको जरा सुपारीको टुक्रा समानको आकारमा खाएमा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ ।हुन्छ। संसार भरि नै हाल रसायनबाट तयार गरिएको औषधीहरुलेऔषधीहरूले दीर्घकालीन रुपमारूपमा स्वास्थ्यलाई हानी गर्न सक्ने संभावना बढी भएको कारणले विकसित देशहरुकादेशहरूका उपभोक्ताहरुलेउपभोक्ताहरूले हाल जडीबुटीमा आधारित औषधीको प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन् ।छन्। तसर्थ सर्पगन्धाको माग बढी रहेको छ ।छ।
सर्पगन्धाको जरामा रहेका रिपर्पिन, सर्पेन्टाईन र एजमालिन आदि नामका मुख्य वनस्पति जन्य रसायनहरुरसायनहरू उच्च रक्तचाप , निन्द्रा नलाग्ने , पागलपन , मानसिक उत्तेजना र मृगि जस्ता रोगहरुमारोगहरूमा समेत उपयोगी भएकोले हानी रहित प्राकृतिक औषधीको रुपमारूपमा प्रयोग गरिन्छ ।गरिन्छ। तसर्थ उपर्युक्त रोगहरुरोगहरू निदान गर्न सर्पगन्धा महत्वपूर्ण र हानी रहित कच्चा पदार्थको रुपमारूपमा ख्याति प्रा्प्त जडिबुटिको रुपमा चिनिन्छरूपमा ।चिनिन्छ।
नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि निर्माता कम्पनीहरुकम्पनीहरू सिंहदरबार वैद्यखानाले “सर्पगन्धावटी ” , गोरखा आयुर्वेदिक कम्पनीले “टेन्सारिन ” र भारतको डावर कम्पनीले “रिपर्पिन ” नामको औषधि उत्पादनमा सर्पगन्धा जडीबुटीको खपत गरी राखेका छन् ।छन्। जर्मन , अमेरिका जस्ता पश्चिमी मुलुकहरुमामुलुकहरूमा पनि यसको माग प्रशस्त रहेको छ ।छ। विश्व बजारमा माग अनुसार मूल्य फरक फरक रहेका पाइन्छ ।पाइन्छ। नेपालमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले यसको जरा प्रति के.जी. रु १००।–१००।–मा मा खरिदखरीद गर्दछ भने गोरखा आयुर्वेदिक कम्पनीले प्रति के.जी. रु १५०।–१५०।–मा मा खरिदखरीद गर्ने गरेको छ ।छ। जर्मनीमा यसको जराको मूल्य प्रति केजी ५ अमेरिकी डलर अर्थात् ने. रु . ३७५।– रहेको छ ।छ। यसको बजार स्वदेश लगायत विश्व भरि नै भएकोले यसको खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।सकिन्छ।
नेपालमा जनसंख्या वृद्धिको कारणले वन जंगल माथि अत्याधिक चाप हुनुका साथै वन विनाश समेत हुँदै जाँदा हाल यो जडिबुटी प्राकृतिक अवस्थामा दुर्लभ भैरहेको छ भने बाँकी रहेको जंगलबाट अव्यवस्थित संकलन हुनाले लोप हुने स्थितिमा समेत पुगी सकेको छ ।छ। तसर्थ यसको खेती गर्नु नै यसलाई संरक्षण गर्ने र यसबाट आर्य आर्जन गर्न सकिने प्रमुख उपाय हुन आएको छ ।छ। यसको खेती हाल व्यवस।यिक रुपमारूपमा सफल सिद्ध भएको छ पाइएको छ ।छ। वनस्पति विभागले यसको खेती विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बाँके र कैलालीमा पनि खेती गर्न सूरु गरिएको छ ।छ।
यसको खेतीको लागि नरम तथा ओसिलो हावापानी भएको क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ ।मानिन्छ। विरुवाले खुला स्थान भन्दा केही छायाँ मन पराउने भएकोले आंशिक छहारी भएका स्थानमा खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ ।हुन्छ। सर्पगन्धाको खेती तराई देखि १००० मी. को उचाई सम्ममा गर्न सकिन्छ , तापनि तराई र भित्री मधेशहरुमधेशहरू यसको खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।मानिन्छ। हाम्रो देशको तराईको पूर्वी क्षेत्र यसको खेतीको लागि राम्रो मानिएको छ ।छ।
सर्पगन्धा (रावलफिया) खेतीको लागि वलौटे माटो अथवा चिम्ट्याइलो माटो उपयुक्त हुँदैन र दोमट माटो (Sandy Loam) उपयुक्त हुन्छ ।हुन्छ। जग्गा छनौट गर्दा प्रशस्त मात्रामा प्रांगारिक मल भएको , पानी नजम्ने र माटोले पानी सोसेर राख्ने क्षमता भएमा जराको उत्पादन राम्रो लिन सकिन्छ ।सकिन्छ।
सर्पगन्धाको विरुवा उत्पादन मुख्यतया बीउबाट गरिन्छ भने जरा कटिङ्ग र हाँगा कटिङ्गबाट पनि विरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ।
बेर्ना नर्सरी ब्याडमा उमारिन्छ ।उमारिन्छ। रावलफियाको विरुवा उत्पादन बीउबाट गर्न चैत्र ÷ वैशाख महिनामा नर्सरी राख्नुपर्दछ ।राख्नुपर्दछ। बीउ राख्ने जमीन राम्रोसँग खनजोत गरी माटो मिहिन पार्नु पर्दछ ।पर्दछ। नर्सरीमा प्रति वर्ग मीटर ४ के.जी. का दरले राम्ररी पाकेका गोवर मिलाउनु पर्दछ ।पर्दछ। जमीनमा बाली संरक्षण रसायन कीटनाशक फोरेट अथवा फ्युराडन प्रति वर्ग मीटर १००–२०० ग्राम हाल्नु पर्दछ ।पर्दछ। नर्सरी ब्याड १ मिटर चौडाईको र १० से. मी.अग्लो हुनु पर्दछ भने लम्बाई अग्लो हुनु पर्दछ भने लम्बाई जग्गा अनुसार अथवा १० मीटर सम्मको हुनुपर्दछ ।हुनुपर्दछ। यसरी तयार पारिएको ब्याडमा सर्पगन्धा (रावलफिया) को बीऊ चैत्र /वैशाखमा छर्नुपर्दछ ।छर्नुपर्दछ। बीऊलाई ६ से. मी. गहिरौ , बीऊ देखि बीऊको दुरी ५ से.मी. र लाईन देखि लाईनको दुरी १० से. मी. गरी बीऊ रोप्नु पर्दछ ।पर्दछ। नर्सरी ब्याड केही छहारी भएको ठाउँमा अथवा नेट हाउसमा उमार्नु उपयुक्त हुन्छ ।हुन्छ।
==बीऊबाट विरुवा तयार गर्ने==
बीऊलाई वेविस्टनीनको १% झोलमा डुबाएर आधा घण्टा पछि निकालेर छहारीमा सुकाउनु पर्दछ ।पर्दछ। १ हेक्टर जमीनलाई आवश्यक पर्ने बेर्ना उत्पादन गर्न ५.५ के. जी बीऊ आवश्यक पर्दछ ।पर्दछ। उक्त परिमाणको बीऊ राख्ने नर्सरी तयार गर्न १.५ कठ्ठा जमीनको आवश्यकता पर्दछ ।पर्दछ। संकलन गर्ने बित्तिकै बाहिरी आवरण निकाली सफा गरी तयार पारिएका ताजा बीऊबाट सबैभन्दा बढी प्रतिशत अर्थात् ७५ प्रतिशत सम्म विरुवा उम्रन्छन् भने बीऊ पुरानो हुँदै गएमा बीऊको उम्रन सक्ने क्षमता घट्दै जान्छ र १ वर्ष पुरानो बीऊबाट विरुवा उम्रदैन ।उम्रदैन। बीऊ रोपेको ३ हप्तापछि उम्रन सुरु गर्दछन् र ८ हप्तासम्म पनि विरुवा उम्रदै गर्छन् ।गर्छन्। नर्सरी ब्याडमा विरुवाको उचाई १० देखि १२ से. मी. भएपछि विरुवा सार्न योग्य हुन्छन् ।हुन्छन्। यसरी चैत्र ÷वैशाखमा राखिएको नर्सर्रीबाट वर्षायाम शुरु हुनासाथ विरुवाहरु सारिन्छविरुवाहरू ।सारिन्छ।
==कटिङ्गबाट विरुवा तयार गर्ने ==
कटिङ्गबाट विरुवा तयार गर्नको लागि पुराना विरुवाको डाँठ उचित मानिन्छ ।मानिन्छ। यसको लागि बलौटे माटोको ब्याड बनाउनु पर्दछ ।पर्दछ। वैशाख / जेठ महिनामा डाँठलाई १५ देखि २२ से. मी. सम्म लामो हुने गरी काटेर नर्सरी ब्याडमा रोप्नु पर्दछ ।पर्दछ। यसरी रोपिसकेपछि नर्सरी व्याडलाई डाँठबाट नयाँ मुना नआउन्जेल सम्म चिसो पारेर राख्नु पर्दछ ।पर्दछ। यसरी काटेर राखिएका डाँठहरुमध्येडाँठहरूमध्ये ४० देखि ६५ प्रतिशतले जराहरु दिन्छन्जराहरू ।दिन्छन्। कटिङ्गबाट जरा आइसकेपछि सर्पगन्धा खेती गर्ने जमीनमा लगेर सार्नु पर्दछ ।पर्दछ। जराको कटिङ्गबाट पनि विरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ। यसको लागि मुख्य जरालाई केही मसिना जरा समेत पर्ने गरी ३ देखि ५ से. मी . लामो गरि काटेर ज्येष्ठ /असार महिनामा जमीनमा रोप्नु पर्दछ ।पर्दछ। जराको सानो भाग जमीनमा देखिने गरि रोप्नु पर्दछ ।पर्दछ। यसरी रोपिइएका जराबाट ३ हप्तापछि नयाँ टुसा पलाउन सुरु हुन्छ ।हुन्छ। यस विधिबाट ५० देखि ८० प्रतिशत सम्म् जराको कटिङ्गहरुकटिङ्गहरू बाँचेको पाइएको छ ।छ। कटिङ्गबाट उत्पादित विरुवाबाट बाली उत्पादन राम्रो हुँदैन तर बीऊ उत्पादनको लागि यो प्रविधि उपयुक्त मानिन्छ ।मानिन्छ।
नर्सरी व्याडमा विरुवाहरुविरुवाहरू करिव १० देखि १२ से.मी. अग्ला भएपछि खेती गरिने जमीनमा लागि विरुवाहरुविरुवाहरू सार्नु पर्दछ ।पर्दछ। सर्पगन्धा रोप्ने जमीनको तयारी बैशाख / जेठ महिनामा गरिन्छ ।गरिन्छ। जमीन तयार गर्दा प्रति हेक्टर २० टन राम्ररी कुहिएको गोवरमल हाली जमीनलाई गहिरौ गरी खनजोत गर्नु पर्दछ ।पर्दछ।
असार महिनामा विरुवा रोपेमा राम्रोसँग सर्छ र सिँचाइको पनि आवश्यकता पर्दैन ।पर्दैन। विरुवाको जरा लामो हुने नभएकोले जरा सोझो पारेर रोप्नु पर्दछ ।पर्दछ। विरुवा रोप्दा १ लाईन देखि अर्को लाईन ४५ से. मी. र विरुवा देखि विरुवाको दुरी ३० से. मी. हुनु पर्दछ ।पर्दछ। यसरी रोपेको विरुवाहरुबाटविरुवाहरूबाट १८ महिनामा वाली संकलन गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ।
विशेष गरि रोपेको पहिलो वर्ष वर्षा याममा अनावश्यक झारपात गोडी दिनु पर्दछ ।पर्दछ। पहिलो वर्ष विरुवा सानो हुने भएकोले आवश्यकता अनुसार गोडमेल गरी माटो खुकुलो बनाई दिएमा जरा उत्पादन राम्रो हुन्छ ।
सुख्खा मौसममा (फागुनमादेखि जेष्ठ) सम्म सिँचाईको आवश्यकता पर्दछ ।पर्दछ। हप्ता दिन देखि दश दिनको फरकमा र जाडो याममा महिनामा १ पटक सिंचाई गर्नु पर्दछ ।पर्दछ। सिंचाई गरेको खेतबाट जराको उत्पादन राम्रो हुन्छ ।हुन्छ।
रोग तथा किरा फट्याङ्ग्राको प्रकोपः
सर्पगन्धाको विरुवाहरुमाविरुवाहरूमा विभिन्न रोगहरुलेरोगहरूले आक्रमण गर्दछ ।गर्दछ। ढुसीबाट हुने रोगमा , पातमा दाग लागेपछि पात नै झर्ने गर्दछ ।गर्दछ। यो रोगलाई सर्कोस्पोरा लिफ स्पट (ऋभचअयकउयचब भिबा कउयत) भनिन्छ ।भनिन्छ। अर्को रोगमा पातमा मसिना कालो खैरो रंगका थोप्लाहरुथोप्लाहरू देखिन्छन् ।देखिन्छन्। यो रोगले पनि पछि पात नै झर्ने गर्दछ ।गर्दछ। यसलाई अल्टरनेरिया लिफ स्पट भनिन्छ ।भनिन्छ।
अन्य रोगमा पात खुम्चिएर पछि नै झर्ने गर्दछ ।गर्दछ। यस रोगलाई लिफ मोजाईक (भिबा यकबष्अ) भनिन्छ ।भनिन्छ। यसको अतिरिक्त जरामा “निमोटोड” (माटोमा हुने एक किसिमको सुक्ष्म जुका) ले आक्रमण गरेर जरामा गाँठा पार्ने गर्दछ ।गर्दछ। यस्तो रोग लागेमा विरुवा बढ्न सक्दैन र पातको आकार पनि सानो हुन्छ ।हुन्छ। ढुसीबाट लाग्ने रोगहरुलाईरोगहरूलाई ढुसी नियन्त्रण गर्ने औषधि प्रयोग गरेमा रोग रोकथाम गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ।
==बाली संकलन ==
सर्पगन्धाको बाली संकलन भनेको जरा खनेर निकाल्नु हो ।हो। रोपेको १८ देखि ३० महिनामा बाली संकलन गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ। जरा मंसीर / पौष महिनामा खन्नु पर्दछ किनकि उक्त समयमा जरामा सार तत्त्व बढी हुन्छ ।हुन्छ। व्यवसायिक खेती गर्दा १५ देखि १८ महिनामा बाली संकलन गर्दा फाईदाजनक हुन्छ ।हुन्छ। गुणस्तरियता कायम गर्न जरा खन्दा जरामा रहेका मसिना रौं जस्ता जरा समेत रहने गरी र बोक्रा नबिग्रने गरी खन्नु पर्दछ ।पर्दछ। जरा खनीसकेपछि राम्रोसँग सफा गरी हावादार छहारीमा सूकाउनु पर्दछ ।पर्दछ। राम्ररी सुकेका जराहरुकोजराहरूको सानो सानो टुक्रा पनि पिट–पिट भाँचिने हुन्छ ।हुन्छ। यसरी सुकाएका जराहरुजराहरू बोरामा राखी पानी नपस्ने र हावादार कोठामा भण्डार गरिन्छ ।गरिन्छ।
औषधीमा काम लाग्ने भाग यसको जरा हो ।हो। मुख्य जरा २ देखि २.५ फिट सम्मको गहिराईमा सोझै जमीन मुनि गएको हुन्छ भने सहायक जराहरुजराहरू जमीनको चारैतिर फिंजिएका हुन्छन् ।हुन्छन्। सहायक र मुख्य जरामा रौं जस्ता मसिना जराहरुजराहरू हुन्छन् ।हुन्छन्। गुणस्तरिय कच्चा पदार्थमा मसीना रौं जस्ता जरा हुनु अति आवश्यक हुन्छ ।हुन्छ।
१८ महिनामा बाली संकलन गरेमा एउटा बोटबाट १०० ग्रामदेखि ४ के. जी सम्म ताजा जरा उत्पादन हुन्छ ।हुन्छ। १ हेक्टर जमिनबाटजमीनबाट २०००–२२०० के. जी. सम्म जरा उत्पादन हुन्छ भने ३० महिनामा संकलन गर्दा जराको उत्पादन ३३००–३६०० के. जी. प्रति हेक्टर उत्पादन हुन्छ ।हुन्छ। यसरी २ वर्षे विरुवाबाट सुकेको जराको उत्पादन लिन सकिन्छ भने ३ वर्षे विरुवाबाट ३६०० के. जी. सम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ।
सर्पगन्धाले आंशिक रुपमारूपमा छहारी मन पराउने भएकाले कृषि वन कार्यक्रम अन्तर्गत यसको खेती गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ। प्रत्येक घरमा रहने फलफूलको बगैंचामा यसको खेती गरेर थप आम्दानी गर्न सकिन्छ ।सकिन्छ। आजभोलि सरकारी वन जंगल वन उपभोक्ता समितिहरुलाईसमितिहरूलाई हस्तान्तरण गरिएकोले वन जंगलमा पनि सर्पगन्धा रोपेर आम्दानी लिन सकिन्छ ।सकिन्छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/239928" बाट अनुप्रेषित